Axmed Madoobe oo cafis kooban ujediyey Alshabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Madaxweynaha maamulka KMG ah ee Jubba, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa shaaciyay in dagaal lugu qaadi doono deegaannada ay ku sugan-yihiin Al-shabaab ee gobollada Jubbooyinka iyo Gedo.
Axmed Madoobe ayaa 48-saacadood u qabtay dagaal-yahannada Al-shabaab in ay isu soo dhiibaan maamulkiisa, isagoo xusay in 48-saac kaddib ay gobollada Jubooyinka ka billaaban doonaan howl-gallo ka dhan ah Al-shabaab.
“Qorshaha howlgalkan waxuu uu yahay mid an ku doonayno Al-shabaab in looga saaro gobollada Jubbooyinka iyo Gedo, waxaan rabnaa inaan u sheegno 48-da saacadood ee soo socota cid kasta oo isa soo dhiibtaa maamulku wuu aqbali doonaa” ayuu yiri Axmed Madoobe.
Axmed Madoobe wuxuu sheegay in ciddii 48 saac gudaheed iskusoo dhiibta aan wax dhibaato ah loo geysan doonin.
“Wixii inta ka danbeeyo 48 saac, ninkii dagaal lagu qabto keeyfiyadii dagaalka loogu qabtay ayay ku xirnaan doontaa, waana la howlgeli doonaa wax la qarinayana maahan, 48-saacadood ee soo socota” ayuu sidoo kale yiri Axmed Madoobe.
Waa markii ugu horreysay ee Axmed Madoobe waqti kooban u qabto dhalinyarada ka tirsan Alshabaab eek u sugan Jubooyinka iyo Gedo, waxaana warka Axmed Madoobe kusoo beegmay xilli ciidamada dowladda iyo AMISOM la wareegeen degmada muhiimka ah ee Baraawe.